DP World: Khasaare weyn ayaa naga soo gaaray Dagaalka Djibouti - Awdinle Online
DP World: Khasaare weyn ayaa naga soo gaaray Dagaalka Djibouti
October 23, 2019 (AO) – Shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in xiisadda kala dhaxeysa dowladda Jabuuti ay dhaawac xooggan oo dhaqaale u gaysatay shirkadda.
Guddoomiyaha Guud ee Shirakadda DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem ayaa sheegay in shirkadda ay dhib kala kulmeysay inay lacag ka amaahato bankiyada tan iyo markii dowladda Jabuuti ay la wada wareegtay dekedda Doraleh oo ay shirko ku ahaayeen.
“Waxaan sameynnaa maal-gelin balse qiimo badan ayaa nooga baxaya. Taasi waa dhaawac” ayuu yiri Sultan Ahmed oo ku sugan magaalada Kigali ee dalka Rwanda, halkaasi oo shirkaddiisa ay 35 milyan oo dollar ku mala-gelineyso xarun cusub oo ganacsi.
“Waxaa yaraaday bankiyadii lacagta na deemin jiray. Banki kasta oo lacag na deymin lahaa waxa uu leeyahya ‘ka waran haddii dalka aad maal-gashanaysaan uu idinku sameeyo sida Jabuuti?’, marka Jabuuti waddo xun ayay noo furtay” ayuu yiri Sultan Ahmed bin Sulayem.
Dowladda Jabuuti ayaa dekedda Doraleh kala wareegtay DP World, oo wax ka maal-gashatay, bishii Febraayo ee 2018, sababo la xiriira muran soo socday ilaa 2012.
Shirkadda DP World ayaa sharci darro ku tilmaamtay la-wareegistaas, waxaana Maxkamadda London ee Dhex-dhexaadinta Caalamiga ah ay bishii August 2018 xukmisay in qandaraaska DP World uu yahay mid sax ah oo aysan Jabuuti ka bixi karin, Jabuuti waa ay diiday go’aanka maxkamadda.
Previous articleMaxaa looga hadlay kalfadhigii Baarlabaanka ee maanta?
Next articleWar Deg Deg ah: Xoghayaha Guud ee IGAD oo loo Magacaabay Nin Itoobiyaan ah